I-Skype Spy App - Track and Monitor Skype Izingcingo nemiyalezo Yombhalo
Hlola ku-Skype - Bheka i-Skype Chat ne-Ingxoxo Yezwi
Ukulandelela nokuqapha ku-Skype ingxoxo kuyadingeka njengoba izithunywa ezisheshayo ziphendulela ucezu lwekhekhe kubantu abaxhaphaza nge-cyber, abahlaseli be-cyber, izilwane ezidliwayo kanye nabakwa-scammers. I-Skype spy lokusebenza ingaqapha futhi ithole izingodo zombhalo wonke nezwi ethunyelwe futhi zamukelwe kuzithunywa ze-Skype ezisheshayo.
Hlola izingxoxo ze-Skype
Hlola ku-Skype isibe isidingo sehora kusukela ukusetshenziswa kwayo emahhovisi kanye nemisebenzi yomuntu siqu. Abasebenzi bakho basebenzise nsuku zonke ukuthumela amafayela womsebenzi kanye namadokhumenti okuyimfihlo kanye nezingane ezisencane kanye nentsha yokusebenzisa imilayezo yokuthumela imiyalezo kanye nezingxoxo zomsindo nevidiyo. TheOneSpy yenza umsebenzisi ukuba qapha izingxoxo ze-Skype, Izingodo ze-Skype, ngisho noxhumana nabo.
I-TheOneSpy Skype Spy Software ikukwazisa konke
Buka zonke izingxoxo lokho kwenzeka ukuba ku-Skype
Bheka uhlu lokuxhumana ngolwazi oluphelele
Bheka zonke izingodo zekholi yazo zonke umsindo kanye hlola i-Skype isithunywa sevidiyo sezingcingo
Thola ukufinyelela kuwo wonke amagama nezinombolo ezixhunywe ku-Skype
Ingxoxo ye-Skype ihlola i-Android kanye nesimiso esigcwele isikhathi
Bona wonke amafayela abezindaba abelana nge-Skype
Thola ukufinyelela kwakho Iphaneli yokulawula i -OneSpy noma nini lapho ufuna khona, noma kuphi nanoma iyiphi indawo.
Landelela ingxoxo ye-Skype kunoma iyiphi i-OS efana ne-Android ne-iOS.
I-Monito Skype Ingxoxo Kanjani Ku-Smartphones e-Android NgePhaneli Yokulawula I-TOS?
Vula idivayisi yakho yeselula bese uya kuwebhu uphinde uthayiphe cp.theonespy.com. Manje unayo ukufinyelela okuphelele kuphaneli yokulawula ye-TOS. Vakashela "izinsizakalo zami"Bese uthepha kuso. Uzobona imenyu ephelele ngakwesokunxele kwesokunxele kwesikrini. Thepha kuma-IM's logs futhi uzobona ithebhu bese usetha izingosi ze-Skype. Ekugcineni, uzoba nohlu lokubuka futhi uzokwazi buka zonke izingxoxo ze-Skype.
Buka Isimo Sobukhoma
Uma udinga usizo olwengeziwe ukuze hlola ku-Skype, ungabona ithebhu yengxoxo ye-Skype. Vele uchofoze futhi ubone izinto zendawo. Khona-ke ungakwazi ukulandelela kalula izingxoxo ze-Skype.
Izingcingo ze-Skype Voice
Ngemuva kokufinyelela ukungena kwi-Skype izingodo amathebhu amabili azovula esibukweni eyodwa ingxoxo ye-Skype futhi eyesibili izoba Izingcingo ze-Skype Voice. Thepha ku Izingcingo zezwi bese ulalela wonke amakholi bese uyazibuyekeza.
Yiziphi izici esinikeza nge-Skype Spy software?
Gada Izingcingo Zezwi
Ixhunyiwe ngamadivayisi wekhamera
Thola ukufinyelela kwezithombe
Buka umlando wesiphequluli sewebhu
Buka / Vimba izinhlelo zokusebenza ezifakiwe
Funda uthumele / thola ama-imeyili
Buka uhlu loxhumana nabo be-imeyili
Gada Imibiko Yombhalo
Buka ukuthumela nokuthola i-SMS
Bheka umhleli womhlangano
Buka ibhuku lekheli
Buka okufakiwe kwekhalenda
I-OS Switch engenamkhawulo
Khiya / Unlock
I-Cellphone Lock / Vula
I-Lock Lock / Vula
I-Facebook Khiya / Vula
Izaziso ku-SIM ushintsho
Isixwayiso sokungena ngemvume kwendawo
Isixwayiso se-Geo Fence
Setha Izintandokazi Zokulayisha Idatha
Misa okwesikhashana noma Qala uhlelo lokusebenza
Landelela Indawo Yabo
Indawo yamanje ye-GPS
Bheka umlando wendawo
Thola imizila yokuhamba
Buka Amanani Wethu
Udinga ukulandelela i-Skype Messenger bese uthola izandla zakho ku-TheOneSpy
Kuyathandwa kakhulu ku izingxoxo zevidiyo nezingxoxo futhi ewusizo kakhulu emahhovisi, isizathu esilandelayo, sihambisana nawo wonke ama-smartphones. Abasebenzi bangabelana ngamafayela omsebenzi kubasebenzi babo kanye nozakwabo. Futhi ngakolunye uhlangothi futhi kakhulu okuphumelelayo ukwenza izingcingo abangane nabomndeni amalungu avela kude.
Masicabange njengomphathi unokubhuka okuphathelene nokuthembeka komsebenzi wakho kuphela okudingeka usebenzise I-skype spy lokusebenza.
Izingcingo zevidiyo zithandwa ezintsha ezisencane futhi yilokho umthombo oyinhloko wokuxhaphaza inthanethi. Yingakho abazali kufanele baqaphele yonke imisebenzi izingane kanye nentsha ezenzayo ekukhulumeni izingxoxo zomsindo namavidiyo.
Izingane nezintsha zingabelana ngemininingwane yazo ngokuma izithombe zangasese namavidiyo kumfokazi. Ngoba, I-Skype ivumela abasebenzisi ukuthumela ukuthumela imiyalezo, ukubiza nama-multimedia amafayela.
TheOneSpy isofthiwe yokuqapha skype yiwona amathuluzi amahle kunazo zonke kubazali abasha abaphephile nabaqashi ukuba banakekele abasebenzi babo.
Okushiwo AbaBlogi Bethu.
Izinsana Zomdabu ZaseDarijane Ukubhekene Neziqhwaga Nokuthi Zifihlile Kubazali
January 19, 2019 Nicki Marie
January 11, 2019 Brooke Chloe
January 7, 2019 Brooke Chloe
3 ngokusekelwe ku 8 amavoti
I-Skype Spy App